Ukuthuthukiswa, ukuklama, ukukhiqizwa kanye nokumaketha kwemishini ye-CNC yokusika, ukugaya, ukwenza imishini nokuqopha
Ukuthuthukiswa, ukuklama, ukukhiqizwa kanye nokumaketha kwemishini ye-CNC yokusika, ukugaya, ukwenza imishini nokuqopha
I-Op yinkampani yamaPutukezi, eyingxenye ye-Tecmacal Group, ethuthukisa futhi ikhiqize imishini ye-CNC yokusika, ukuqopha nokunyathelisa ngomshini wokugaya, ummese, i-laser, i-plasma nejethi yamanzi nokunye.
Ukuguquguquka kwalo mshini, kusukela esakhiweni sensimbi noma se-aluminium, izinjini ezahlukene, ubukhulu obuhlukene, izinhlelo ezihlukahlukene nobuchwepheshe, kuvumela ukusetshenziswa kwayo emikhakheni ehlukahlukene kakhulu yomsebenzi kanye nasezintweni ezihlukahlukene kakhulu.
Imikhakha yomsebenzi: ukukhangisa, ukusebenza kwensimbi, ukwakha, ifenisha, izimoto, isikhunta, izicathulo, ukhokho, i-aeronautics, [...].
Izinto zokwakha: izinkuni, i-acrylic, i-PVC, i-ceramics, isikhumba, ukhokho, iphepha, amakhadibhodi, izinhlanganisela, ipulasitiki, i-aluminium, [...]
Ngokusekelwa Ihhovisi Le-R&D Yangaphakathi kanye nehhovisi lezobuchwepheshe, zonke izinto zokusebenza ze-Optima zinikeza ithuba lokuzivumelanisa nezimo nezidingo zamakhasimende kanye nemininingwane ethile yomsebenzi ahlose ukuwuthuthukisa, futhi iqinisekisa ukuvela njalo kwemikhiqizo ehlinzekwa emakethe.
Njengoba ingelinye lamandla ayo, ukusebenzisana kwezinto ezihlukahlukene kanye nokusabela kumaphrojekthi enziwe ukuze kulinganiswe, umgomo we-Optima awukona neze ukwenqaba inselele entsha.
Isikhathi sokuthumela: Mar-21-2022
IAc Servo Drive IMitsubushi HMI 1kw Servo Motor IServo Motor Delta HMI ILogic Controller Plc